6x14 Podcast ee Actualidad iPhone: Kiiska cusub ee la dhaleeceeyay ee iPhone 6s | Wararka IPhone
Roobka dhaleeceynta Apple maalmihii la soo dhaafay. Marka hore, shirkaddu waxay bilaabeysaa dacwad aan waxba ka qabanayn wax abuuris mooyee dib u eegista xun iyo tan labaad, a dukaan app sharci daro ah on App Store. Waa labada mowduuc ee aan si qoto dheer ugu soo qaadanay barnaamijka toddobaadkan oo aan mar labaad toos uga baahinnay barnaamijka 'Periscope'. Waxaan soo aruurineynaa faallooyinka ugu wanaagsan ee kuwa raacsan ay nooga tageen tooska iyo Twitter-ka. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku dhawaaqeynaa barnaamij gaar ah oo lagu soo afjarayo sanadka, sidii aan horey u dhicin oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 6 × 14 Podcast ee Actualidad iPhone: Kiiska cusub ee la dhaleeceeyay ee iPhone 6s
Haa, hadda waxaad ku isticmaali kartaa adabtaradaada hillaaca illaa SD-ka leh iPhone-ka